Sidee loo qori karaa naftaada mawduucyada SEO saaxiibtinimo?
Markaad hagaajineyso goobtaada joogitaanka goobta, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad heshay dhammaan farsamooyinka muhiimka ah ee la daboolay si loo damaanad qaado si fiican u-fiicneyn iyo SEO-content friendly. Qorista maadada wanaagsani waa sahlan tahay. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad qabato shaqooyin badan oo adag si loo hubiyo in waxyaabaha aad ka sarayso ay sareeyso mashiinnada raadinta - gmbh umzug ins ausland. Si aad u sameyso mawduucyadaada si fiican u muuqata oo muuqaal ahaan loogu arko qoryaha raadinta, waxaad u baahan tahay inaad raacdo mabaadii'da qaar ka mid ah naqshadeynta nuxurka. Shaki kuma jiro, waxay qaadataa wakhti aad ku abuurto boggaga internetka oo si fiican u-fiicnaaday iyo SEO-saaxiibtinimo. Si kastaba ha ahaatee, habka ugu wanaagsan ee hawshaan, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto mawduucyo SEO saaxiibtinimo adiga adiga. Maqaalkani, waxaan isku dayi doonaa inaan ka nadiifiyo shakiinta aad haysato oo ku siiso farsamooyin qoraal ah oo qarsoodi ah.
Talooyin lagu qorayo nuxurka SEO-friendly Friend
Ka hor inta aan bilaabin inaan ka hadalno waxyaabaha muhiimka ah ee SEO, waxaan jeclaan lahaa inaan sheego ereyo kooban oo ku saabsan ujeedooyinka SEO waxaad fahamsan tahay ujeedka ujeedada wax qabad wanaagsan. Hadafka ugu muhiimsan ee raadinta mashiinka raadinta waa inaad hubiso in meelaha aad ka kooban tahay TOP ee Google SERP. Xirfadaha raadinta waa in ay fahmaan waxa aad ka kooban tahay oo ku tusi doona su'aalaha ku haboon ee user.
Si loo wanaajiyo darajooyinkaaga mashiinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad raacdo talaabooyinka muhiimka ah:
waxay bixiyaan adeegyo tayo sareeya macaamiishaada;
hagaajinta maamulka domainkaaga;
ganacsigaadu waa mid sharaf leh.
Waxaa jira laba nooc oo istiraatiijiyado raadin raadin ah oo aad ku hirgelin kartid si aad u hagaajisid goobtaada iyadoo loo eegayo heerarka motor search.
Waxaad sameyn kartaa SEO-gaaga ama ka bixida. In-house SEO waa mid la awoodi karo oo ku lug leh dadka ka ogow bogga si fiican. Si kastaba ha noqotee, si loo hagaajiyo darajooyinkaaga boggaaga, adiga waa inaad ka warqabtaa dhammaan farsamooyinka istiraatiijiyadeed ee lagama maarmaanka ah iyo casriyeynta suuqyada suuqa. Hannaanka hoyga gudaha waxaa laga yaabaa inuu waqti badan ku dhaco oo nasiib darro ah. Inkastoo SEO-ga la-shaqeeyaha ah uu fuliyo khabiirada la xaqiijiyay ee arimahan. Waxay yaqaanaan dhammaan dhinacyada wax-qabadka ee muhiimka ah, waxayna ku siin karaan tayada ugu tayada leh maaddaama ay yaqaanaan matoorada raadinta laga filayo goobtaada. Iyada oo lala kaashanayo khabiirada SEO ee saddexaad, waxaad awoodi doontaa inaad hesho natiijooyin wanaagsan 3-6 bilood.
Maanta, waxaan isku dayi doonaa inaan ku baro sida loo abuuro tayada iyo naftaada SEO-ku-naftaada adiga oo kadibna keydisa lacagtaada adeegga daabacaadda SEO. Waxyaabaha si fiican loo fiicnaaday uma baahna inay noqoto mid adag ama waqti-qaadasho, haddii aad fahamsan tahay sida bogga-bogsiinta ay uga shaqayn karto dhinacaaga. Waa kuwan sida loo qoro waxyaabo SEO-saaxiibtinimo ah oo labadaba baaritaanka iyo macaamiishaada iman doona ay ku raaxaystaan. Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah waa qaybta ugu muhiimsan ee ololaha SEO ee guuleysta iyo hoos-hoosaadka line for content saaxiibtinimo SEO. Qodobbada muhiimka ah ee loola jeedo iyo la beegsado ayaa go'aamiya qiimeynta boggaaga. Si aad u sameysid baadhis sax ah oo muhiim ah, waxaad u baahan tahay inaad ka fekertid waxa raadinta weydiinta macaamiishaada laga yaabo inay isticmaalaan si aad u hesho boggaaga internetka. Waa in aad hormarisaa garashada waxyaallaha ay ka helayaan goobtaada. Si aad u noqotid TOP natiijooyinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad doorato mudo dheer iyo shuruudaha raadinta yar. Si loo fududeeyo geeddi-socodka cilmi-baarista, waxaa laga yaabaa inaad hirgaliso qalabkan sida "AutoCare Auto", "SEO", ama "Keyword Keyword Planner". Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaadan sameysan oo keliya liis ay ku qoran yihiin ereyada ugu muhiimsan ee muhiimka ah laakiin sidoo kale waxay ku siinayaan aragti ku saabsan ereyada muhiimka ah ee tartamadaada.
Naqshad nuxur leh
Dabcan, ma jirto sabab lagu dhejiyo nuxurka cusub haddii aysan sax aheyn. Xitaa haddii aad fikrad ka qaadato ilo kale, waxaad u baahan tahay inaad bixiso aragti u gaar ah oo ku kordhin doonta qiimaha mawduuc gaar ah. Marka la eego nuqul daabacan, waxaad halis u tahay in aad rigoore ka gasho Google oo aad lumiso booska jumladaada. Waxaa intaa dheer, dadka isticmaala waxyaabahan aan asalka ahayn ee ilo kale, ma qaadan doonaan domainkaaga sida ku haboon oo kalsooni leh. Hubso in waxyaabaha aad leedahay ay tahay mid gaar ah, ku habboon oo munaasab u ah si ay ula galaan dadka isticmaala una celi macaamiishaada. Waxaad ka hubin kartaa asalkaaga asalka ah aaladaha badan ee la heli karo sida Copyscape ama Qalitaanka Qalitaanka.
Titles optimization and structuring
Website-kaaga ayaa ah kan ugu horreeya ee la isticmaali karo marka la raadinayo. Waxay u adeegtaa sidii horey loogu soo koobi lahaa boggaaga. Cinwaankaagu waa inuu ahaadaa mid sax ah, qabashada iyo SEO-saaxiibtinimo. U hubso inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah oo aad ku qorto cinwaankaaga. Isticmaal ereyada korontada iyo iska ilaali si aad u abuurto cinwaan cad oo jilicsan. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto macluumaadka ugu muhiimsan ee ku saabsan ganacsigaada 60 xaraf. Taasi waa sababta aan kugula taliyo inaad maskax ahaan aad u aragto noocyo kala duwan sida aad kartid.
Waxaa intaa dheer, inaad ka warqabto tagsiyada SEO oo hubi inaad hirgeliso H1 tagto dhammaan koobabyada gudahooda. Sidoo kale waa go'aan go'aana ah oo lagu kala saari karo cutubyada qaarkood subtitles si aad uga dhigto mid sahlan inaad wax akhrido oo aad u rogto. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho H2 tags dhammaan subtitles aad. Xaqiiji inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee ku qoran munaasabadaha iyo subtitles si aad ugu oggolaato boodhadhka si dhakhso ah u foorarsado mawduucaaga si degdeg ah.
Si aad u siiso riix si aad u-dejiso SEO-friendly, waxaad u baahan tahay inaad leedahay URL habboon. Ku beddel URL-yada khaldan iyo kuwa aan toosnayn oo ay ku dhajiyaan kuwa saxda ah. URL-yada aan haysan wax dareen ah ma qaadaan wax qiimo ah oo loogu talagalay dadka isticmaala ama bots Google. URL SEO ah oo saaxiibtinimo waa mid ka mid ah in uu leeyahay erayo muhiim ah. Adoo cusbooneysiinaya URL-yadaada, waxaad kordhineysaa fursadaada inaad adigu gashid adigoo raadinaya kuwa raadinaya.
Nuxurka qoraallada SEO
URL-kaaga goobta raadinta. Waa waxa ugu horreeya ee ay isticmaalaan akhriyi karaan kahor intaanad gelin bog internet. Sharraxaadda meta waa inay noqotaa mid firfircoon oo ku xiran content-kaaga boggaaga si ay u isticmaalaan dadka isticmaala boggaaga macluumaad dheeri ah. Waxyaabaha lagu sharraxay meta-sharaxeed ayaa kaa caawin kara inaad kordhisid qiimaha riixitaanka iyo xitaa wanaajinta darajooyinka bogga.
Isku xirnaanta gudaha iyo dibadda
Xiriirada gudaha waxay muujinayaan in goobtaada ay tahay mid lagu qaddariyo mawaarid gaar ah. Iyada oo la fulinayo xiriirada gudaha, waxaad ka abuuri kartaa isdaba maris mid ka mid ah boostada. Interlinking waxay hagaajin doontaa xiriirka ku yaala goobtaada adoo siinaya qiime dheeraad ah qodobbada qaarkood. Waxaa intaa dheer, waxay kaa caawin doontaa inaad raadisid bots si aad u fahamtid mawduucyada muhiimka ah.
Xidhiidhada dibedda ee ku jira ereygooda waxay muujinayaan maamulka domainkaaga iyo hagaajinta maqalkaaga. Xiriirada dibedda ee mashiinnada raadinta ee mawduucaagu yahay tayada ayadoo la wadaagayo dadka isticmaala iyo ilaha kale ee la xiriira webka. Waa macquul in la isku xidho meelaha aad ku qadarin karto iyo kuwa mudda dheer soconaya sababtoo ah xiriiriyayaashu waxay leeyihiin kalsooni.